सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्काचर्की, ओलीले भने- म नहुँदा त्यत्रो छटपटी ? — sancharkendra.com
सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्काचर्की, ओलीले भने- म नहुँदा त्यत्रो छटपटी ?
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर बिहीबार संसद् र शुक्रबार स्थायी समिति सदस्यको भेलामार्फत अभिव्यक्त गरेको असन्तुष्टिले सत्तारूढ दलभित्र हलचल पैदा भएको छ ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने नेपालको असन्तुष्टिलाई सरकार ढाल्ने ‘षड्यन्त्र’ मान्न नहुने बताए। ‘आलोचना सरकारलाई सफल बनाउनकै लागि गर्ने हो,’ उनले भने, ‘विकल्प खोज्ने कुरा अहिले कल्पना गर्न सकिन्न। सरकारको आलोचनालाई लिएर अरू कुरा सोच्न पनि मिल्दैन।’ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य खबर रहेको छ ।
२०७५ असोज १४ गते प्रकाशित